PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်း ကပ် မိ၍ ဘုရားပေါ်တွင် ဓါးဖြင့်ထိုးသတ်မှု
ဖြစ်ပါသတဲ.။ မြတ်စွာဘုရား။ လောကကြီး၌…..ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီနည်းဟု ရင်ဘတ်ကို ဖိမိပါသည် ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် နိုင်ငံတော်ပိုင် ပစ္စည်းများ ၊ လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းများ ခေတ်စားလာသည်. နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားများသည်လည်း ဘုရားဆိုင်ခန်းများ ၊ ဓါတ်ပုံလုပ်ငန်းများ ၊ ရွှေဆိုင်း ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများ ၊ ကားရပ်နားခြင်းလုပ်ငန်းများ ၊ အုန်းပွဲ ငှက်ပြောပွဲေ ရာင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများ ၊ စသော ၀င်ငွေရရာရကြောင်း လုပ်ငန်းမှန်သမျှကို ကန်ထရိုက်ပေးခြင်း ၊ လေလံပစ်ခြင်းများကို တွင်ကျယ်စွာ လုပ်ဆောင်လာကြပါသည် ။ ထိုအထဲတွင် အင်းလေး ဖောင်တော်ဦးဘုရားလဲ ပါဝင်ပါသည် ။ အခြား လုပ်ငန်းများကို မည်သို.ကန်ထရိုက် ချထားပေးလဲ မသိသော်လည်း ဖောင်တော်ဦး စေတီတွင် ရွှေဆိုင်းရောင်းချခွင်. ရထားသူ ကန်ထရိုက်ကတော. တော်တော် စီးပွားရေးဆန်သည်ဟုပဲ ပြောမလား ၊ သဘောထား တင်းမာသည်ပဲေ ပြာမလား။ စီးပွားရေး လာဘ်မြင်သည်ဟုပဲ ပြောမလား။ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားရှိ ဗုဒ္စရုပ်ပွားတော် ငါးဆူကို ရွှေသင်္ကန်း ဆက်ကပ်ပူဇော်လိုလျင် မည်မျှအရည်အသွေး ကောင်းသော ရွှေဆိုင်းများကို ဘုရားဖူးမှ ယူဆောင်လာသည်ဖြစ်စေ ၊ မိမိတို. ရောင်းချသော ရွှေဆိုင်းမှ တစ်ပါး မည်သူ.ကိုမှ ကပ်လှူ ပူဇော်ခွင်.မပြုပါ ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တိုးရစ်များသည် သူတို.နှင်.အတူပါလာသော ရွှေဆိုင်းများကို ပူဇော်ခွင်.မရ၍ ရွှေများကို အလှူခံမှန်ပုံးထဲတွင် ထည်.၍ ပြန်သွားရတာ ကျွန်တော် မကြာခနတွေ.ဖူးပါသည် ။
မြန်မာဘုရားဖူးများ ယူဆောင်လာသော ရွှေဆိုင်းများကိုလည်း မှန်ပုံးထဲတွင် ထည်.ကာ လှူခဲ.ရပါသည် ။ ထိုမှန်ပုံးထဲမှ ရွှေများကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးသလဲတော. ကျွန်တော်တို.လဲ မတွေးတတ်ပါ ။ အင်းလေး ဖောင်တော်ဦး ဘုရားသို. ရောက်တိုင်း အောက်ပါ ကြေငြာချက်ကို အသံချဲ.စက်ဖြင်. ကြေငြာနေတာကိုလည်း အမြဲတမ်းလိုပင် ကြားရလေ.ရှိပါသည် ။
လှေဆိပ်နှင်. ဘုရားပရ၀ုဏ်အတွင်း အတင်းအဓမ္မ လိမ်လည် ရောင်းချနေသော ရွှေဆိုင်းများအား ဘုရား၌ ကပ်လှူပူဇော်ခွင်. ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည် “ဟူသတည်း ။သဘောကတော. ငါ.ထံမှ ရွှေကိုသာ ၀ယ်ကြကုန်လော. ဟူသည်. အဓိပါယ်ဖြစ်သည် ။ ထိုကြေငြာချက်ကို တိုးရစ်များက ဘာတွေ ပြောနေတာလဲဟု မေးသောအခါ ကိုယ်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းရမှာ ရှက်စရာ ကောင်းလွန်းသဖြင်. ဘုရားဖူးတွေ လှေပေါ်ကို အတက်အဆင်း သတိထားကြပါလို. ကြေငြာနေတာပါ ဟုပြောရသည် ။
ထိုနေ.ကဖြစ်စဉ်မှာ ဘုရားဖူးတစ်ဦးက ကန်ထရိုက် ရောင်းသော ရွှေကိုမ၀ယ်ပဲ မိမိမှာပါသည်. ရွှေကို ဘုရားအားဇွတ်ကပ်ရန် ကြိုးစားရာမှာ ကန်ထရိုက်က ဓါးဖြင်.ထိုးခြင်း ကိုခံရခြင်း ဖြစ်သည် ။
ဤဆောင်းပါးကား ကန်ထရိုက်များ၏ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်ပုံ၊ ၀ိသမ လောဘဇော တိုက်နေပုံတို.ကို ဖော်ပြလိုရင်း မဟုတ်။ လူတစ်ယောက် ဓါးထိုးခံရပြီးနောက် မည်ကဲ.သို.အရေးယူ ဆောင်ရွက်ကြသည် ဟူသော နောက်ဆက်တွဲကိစ္စ ကို ပြောလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ ပုံမှန်အားဖြင်. ကျွန်တော် နားလည်သည်မှာ လူတစ်ယောက် အရေးပေါ်ဒါဏ်ရာရ၍ သေကောင်ပေါင်းလဲ ဖြစ်သောအခါ အနီးဆုံးဆေးရုံသို. ပို.ဆောင် ကြရစမြဲ ဖြစ်သည် ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာလဲ ဤသို.ပင် ဆောင်ရွက်ကြသည် ။ သို.သော် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံကား ရှာမှရှားသော နိုင်ငံပေတကား ။ ဓါးထိုးခံရသော လူနာသည် အနီးဆုံး (အခင်းဖြစ်ရာ နေရာတစ်ဝိုက်၌ အကောင်းဆုံး ) ဆေးကုသမှု ပေးနိုင်သော ညောင်ရွှေပြည်သူ.ဆေးရုံကြီးသို. ချက်ခြင်းပို.ဆောင် ကုသမပေးကြပဲ ။ နမ်.ပန်ရွာ ရဲကင်းသို. စက်လှေဖြင်. သွားကြရသတဲ.။ လူမမာက ဓါးဒဏ်ရာ တန်းလမ်းနှင်. မလိုအပ်ပဲ စက်လှေ တဖုတ်ဖုတ်စီးကာ ဆေးရုံရှိရာ ညောင်ရွှေမြို.နှင်. ခရီးဆန်.ကျင်ဘက်ဖြစ်သောနမ်.ပန်သို. သွားရပါသတဲ.။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေ ၊
နည်းဥပဒေများအရ ရဲအရေးပိုင်သော အမှုအခင်း တစ်ခုကြောင်. ဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်လျင် ရဲဆေးစာ မပါပဲ မည်သည်.ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံကမှ ကုသပေးခွင်. (အသက်ကယ်ခွင်.) မရှိပါတဲ.ခင်ဗျာ ။ ဒါ.ကြောင်. နီးတာ ဝေးတာအပထား ၊ သေတာရှင်တာ အပထား ရဲမလာလျင် ငုတ်တုတ် ထိုင်စောင်.ကြရမည်. လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများပေတကား ။
သတင်းရင်းမြစ်ကို - Ko Nyi , အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်းမှ ကူးယူခဲ့ပါသည်။